ရှုပ်ထွေးသောပစ္စည်းများအတွက်ရိုးရာပုံစံကိုသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊ point mode လုပ်ကြံခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ လေးလံသောအလေးချိန်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသောရိုးရာ mode ပစ္စည်း၊ ရှုပ်ထွေးသောမျက်နှာပြင်နှင့်လုပ်သောပုံစံတွင်အခက်ခဲဆုံး၊ ရှုပ်ထွေးသောပစ္စည်းများကိုဖွဲ့စည်းစဉ်တွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်တိကျမှု၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ထို့ကြောင့် graphite သည်၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအဖြစ်ထုတ်လုပ်သည့်နေရာတွင်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဂရပ်ဖိုက်သည်တစ်မျိုးတည်းသောပုံဆောင်ခဲကာဘိုက်ဖြစ်ပြီး ၄ င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ -
ကောင်းသောအပူတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူ 3.thermal တိုးချဲ့ကိန်းနိမ့်သည်
ကောင်းသောချောဆီနှင့် wear- ခံနိုင်ရည် 4.with
5. မြင့်မားသောအပူချိန် (800 above အထက် copper ကြေးနီအလောင်းများနှင့်အတူဂဟေ) အပူချိန်မြင့်တက်နှင့်အတူတိုးမြှင့်ပြင်းထန်မှုအောက်မှာ
လက်ရှိ၌, graphite mode ကိုအဓိကအားဖြင့်ခြောက်လရှုထောင့်ကျယ်ပြန့် application ကိုအောင်မြင်သည်
1. အနိမ့်မထိသောသတ္တုများစဉ်ဆက်မပြတ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်တစ်သမတ်တည်းဆက်တိုက်သတ္တုများပုံသဏ္ဌာန်ကိုအသုံးပြုသည်။ graphite mode ကိုအသုံးပြုသည်။ ကောင်းမွန်သောအပူစီးကူးမှုနှင့်ချောဆီအရည်ကြည်မှုကြောင့်စသဖြင့်အရွယ်အစားပိုမိုတိကျပြီးချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ၎င်းသည်ကုန်ချောများ၏သွားနှုန်းကိုအလွန်တိုးတက်စေပါသည်။
ဖိအားများပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် 2.mode: အတုဖိုက်ဖိုက်ဖိုက်ဒ်သည်အတုအယောင်သတ္တုများအတွက်ဖိအားပေးခြင်းအတွက်အောင်မြင်စွာအသုံးချပြီးဖြစ်သည်။ သွပ်သတ္တုစပ်များနှင့်သတ္တုဖိုက်ဖိုက်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးနီအလွိုင်းများကိုမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်စသည်တို့တွင်အသုံးပြုသည်။
centrifugal သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းအတွက်ဂရပ်ဖစ်ပုံသဏ္iteာန်: ဂရပ်ဖိုက်ပုံစံများကို centrifugal casting တွင်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကြေးဝါလက်များကို 25mm အထူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအတုဖိုက်ဖိုက်ပုံစံကိုအသုံးပြုသည်။
4.hot press die: အတုဖိုက်ဖိုက်ပုံစံများသည်ဝိသေသလက္ခဏာနှစ်ရပ်နှင့်အတူသတ္တုစပ်အတွက်သံမဏိကိုဖိအားပေးရာတွင်အသုံးပြုသည်။ တ ဦး တည်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်အပူထည့်သွင်း, ကတိုတောင်းသောကာလပြီးနောက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း sinter အလောင်းများကိုရနိုင်သည်။
5.glass forming mode: ဖန်ထည်၊ ကွေး၊ ဖန်နှင့်အခြားအထူးဖန်ပုလင်းများထုတ်လုပ်သည့်ဖန်ထည်များသည်မကြာသေးမီကဖန်လုပ်သောဖန်ထည်များတွင်မလိုအပ်သောပုံစံပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
6.sintering mode နှင့်အခြားစိန် sintering mode: အတု mode ကို၏ဝိသေသကိုအသုံးချ, အပူပြီးနောက်ကျုံ့, ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်နှင့် Semi conductor စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်မလိုအပ်သောပစ္စည်းဖြစ်လာသည့် Crystal ပြွန် sinter mode ကိုနှင့်ထိန်သိမ်းလုပ်နိုင်သော။
ဘုံ mode ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းရှုပ်ထွေးသောပစ္စည်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှိုင်းယှဉ်
ပစ္စည်း Volume ကိုသိပ်သည်းဆ g / cm3 အပူတိုးချဲ့ 10-6 / of ၏ကိန်း
ဖိုက် ၁.၇ ၂.၇
လူမီနီယံ ၂.၇ 23
သံမဏိ ၇.၈၆ 12
ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ / epoxy ၁.၆0~ 2.7
ဖန်မျှင်ဖိုင်ဘာ / epoxy ၁.၉ 12.6 ~ 23
နောက်တစ်ခု: Lid ၏လုပ်ငန်းစဉ်